I-beta yokuqala ye-Apex Legends Mobile iya kuphehlelela ngentwasahlobo | IPhone iindaba
I-Apex Legends ye-Beta yokuqala ye-Beta isungula le Ntwasahlobo
UIgnacio Sala | 20/04/2021 10:00 | IPhone imidlalo
Ukusukela ukukhutshwa kwayo kwee-PC kunye nee-consoles ngoJanuwari 2019, ii-Apex Legends ziye zaba njalo kwenye yeyona nto idume ngokulwa phakathi kwabasebenzisi, enye into enomdla kuzo zombini iFortnite, i-PUBG kunye neFowuni yeDuty: Warzone. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nezi zihloko zintathu, akukabikho nguqulo yezixhobo eziphathwayo. Ngethamsanqa, iyeza.
Kwiposi elipapashiweyo kwibhlog ye-EA, Ukuzonwabisa kwe-Respawn kuqinisekisile, kwakhona, ukuba iyasebenza kuhlobo olutsha ngokupheleleyo lweentsomi ze-Apex zezixhobo eziphathwayo, uguqulelo oluya kubonelela ngamava amatsha ngokupheleleyo, Ibizwa ngokuba yi-Apex Legends Mobile kwaye i-beta yokuqala iya kumilisela entwasahlobo.
Ngokwenkampani, ibeta yokuqala yesi sihloko izakwazisa ngentwasahlobo, Ekuqaleni kwi-Android kwaye kungekudala emva kokufika kwi-iOS. UChad Grenier, osayina inqaku, ubanga ukuba umdlalo uza kuba "nolawulo olukhethekileyo" kwizikrini zokuchukumisa. Ukongeza, ikwatsho ukuba iyakubonisa ukwenziwa ngononophelo okuya kwenza ukuba i-Apex Legends Mobile ibe yeyona nto iphambili emfazweni ifumaneke kwi-smartphone.
Umdlalo izogcina iingcambu zokuqala zomdlalo Kwaye iya kuzisa amava ukuba abasebenzisi bePC kunye nabathuthuzeli sele bewazi. Masibe nethemba lokuba zonke iincukuthu, ukungasebenzi kakuhle kweseva, ubunyani xa kufikwa ekukhathazekeni okanye ekubetheni abalinganiswa abathile, lag yesiqhelo kunye nezinye ziya kusonjululwa ngokuqinisekileyo, into ekunokwenzeka ukuba ithathe ingqalelo yokuba ikumdlalo ukusukela ngosuku lokuqala.
Kule nto, kufuneka songeze ukuba uluntu olunokhuphiswano luthatha iiveki ezimbini ayikwazi ukuphinda iqhubeke nokhuphiswano ngenxa ye-hacker, ingxaki evela kwi-EA ndisifumene isisombululo.
Mahala kwaye akukho mdlalo onqamlezileyo
Le nguqulo iya kubonisa ukupasa kwemfazwe eyahlukileyo ngokupheleleyo esinokuyifumana kuhlobo lweekhonsoli kunye neekhompyuter. Yintoni egqithisile, Awuyi kuba nomdlalo ophambeneyo Ngezi zixhobo, nditsho nokutshintsha kweNintendo, ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba ayiboneleli ngokudibana nabalawuli, elinye lawona manqaku mabi kwesi sihloko ukuba ekugqibeleni iqinisekisiwe ekusungulweni kwayo.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-Apex Legends ifike kwiNintendo switch, inguqulelo, ngenxa yokusikelwa umda kwekhonsoli, ishiya okuninzi okunqwenelekayo ngokwemizobo kunye nokusonjululwa, ungasathethi ke ngomda kwi-30 fps. I-Apex Lengeds Iselfowuni iya kufumaneka kweyakho khuphela simahla, Kunye neenguqulelo zePC kunye nekhonsoli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » I-Apex Legends ye-Beta yokuqala ye-Beta isungula le Ntwasahlobo
IMicrosoft isungula i-xCloud ye-iPhone kunye ne-iPad kwi-beta